ဆန်တစ်ပြည် ငွေကျပ် ၁၁၀၀ ထက်ပို မရောင်းရ ဟု သတ်မှတ်လိုက်ပြီ - Tha Dinn Oo
ဆန်တစ်ပြည် ငွေကျပ် ၁၁၀၀ ထက်ပို မရောင်းရ ဟု သတ်မှတ်လိုက်ပြီ
ဒေသအလိုက်မှ ဆန်လက်လီအရောင်းအဆိုင်များအနေဖြင့် ပြည်သူလူထုထံသို့ ဆန်တစ်ပြည်လျှင် ငွေကျပ် ၁၁၀၀ နှုန်းထက်မပိုသည့် ဈေးနှုန်းဖြင့် ပြန်လည်ရောင်းချနိုင်ရန်အတွက် အရန်ရိက္ခာဆန်များအား ရောင်းချ ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်က ဇူလိုင် ၇ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ “ကျွန်တော်တို့ မူလရည်ရွယ်ချက်ကိုက ဒီလုပ်သားပြည်သူတွေ ဆန်လိုအပ်တဲ့သူတွေ သက်တောင့်သက်သာနဲ့ ပြန်လည်ရောင်းချဖို့ဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့က အရန်ဆန်ကို ဝယ်ယူထားတာဖြစ်တယ်။ အခုဆိုရင် ကျွန်တော် တို့က အရန်ဆန်အရေအတွက် ပြည့်ခါနီးပြီ။ ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်း ဒီအရန်ဆန်က ဝယ်နေဦးမယ်ဆိုတော့ ပထမရှိတဲ့ဟာတွေကို သက်တောင့်သက်သာဈေးနဲ့ ပြည်သူလူထုကိုရောင်းပေးမယ်။ နောက်ထပ်လည်း ကျွန်တော်တို့ အရန်ဆန်ရဲ့ မူဝါဒအရ ဆက်ပြီးတော့လည်းဝယ်နေမယ်” ဟု မြန်မာနိုင်ငံဆန် စပါးအသင်းချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
လက်လီဆိုင်များအနေဖြင့် ဆန်တစ်ပြည်လျှင် ၁၀၀၀၊ ၁၀၅၀၊ ၁၁၀၀ကျပ်ထက် မပိုသောဈေးနှုန်းဖြင့် ပြန်လည် ရောင်းချပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ၎င်းဆန်အား ဈေးတင်ရောင်းချခြင်းမျိုး မပြုလုပ်ရန်အတွက် ဆိုင်များအား စိစစ်မှုများပြုလုပ်သွားရန်ရှိကြောင်းသိရသည်။ “ကျွန်တော်တို့ဆီကနေပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့ဈေးနဲ့ ယူသွားတဲ့ မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ ဆန်ဆိုင်တွေအနေနဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ဆီကယူတဲ့ ဆန်အမျိုးအစားတစ်မျိုးကို တင်မရောင်းအောင် ကတိခံယူချက်လည်း တောင်းတယ်။ စီစစ်ဖို့တွေလည်း လုပ်မယ်လို့ သူတို့ကိုပြောထားတယ်။ မြို့နယ်စားသုံးသူရေးရာအဖွဲ့နဲ့ ဒီဆန်စပါးအသင်းချုပ်နဲ့ တာဝန်ရှိတဲ့သူ တွေနဲ့ပေါင်းပြီး အခါအားလျော်စွာ စီစစ်မယ်။ ဒီကျွန်တော်တို့ရောင်းချလိုက်တဲ့ဆန်အမျိုးအစားပေါ်မှာ သတ်မှတ် ထားတဲ့ ဈေးထက်များနေရင်လည်း စားသုံးသူတွေအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဆီကို ဆက်သွယ်ပြောကြားနိုင် တယ်”ဟု မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်မှ ရောင်းချမည့် ၎င်းအရန်ဆန်မှာ လုံးရှည် / ဧည့်မထ ၂၅ မှတ် ဆန်ဖြစ်ပြီး ၁၀၈ ပေါင် တစ်အိတ်လျှင် ၂၂၈၀၀ကျပ်နှုန်းဖြင့် မှတ်ပုံတင်အဆိုပြုလာသည့် လက်လီဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို တစ်ကြိမ်လျှင် အိတ်ရေ ၂၀၀အထိ အများဆုံးရောင်းချပေးရန် စီစဉ်လျက်ရှိသည်။
အရန်ဆန်များအား ဝယ်လိုသည့် လက်လီဆိုင်များအနေဖြင့် လျှောက်လွှာများကို မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်း ချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးကုန်သည်များအသင်းသို့ ပေးပို့နိုင်ကြောင်းနှင့် စက်မှုဇုန်များရှိ အလုပ်သမားဦးရေ များသော စက်ရုံများအနေဖြင့်လည်း ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။လက်ရှိတွင် ဇူလိုင် ၈ရက်နေ့ အရန်ဆန်ဝယ်ယူရန် လျှောက်လွှာတင်ထားသည့် လက်လီဆိုင်မှာ ၁၅ ဆိုင်ရှိ ကြောင်း နှင့် လျှောက်လွှာတင်ထားသည့် လက်လီဆိုင်များထဲမှ အင်္ဂါရပ်ညီညွတ်သည့် ဆိုင်များအားလုံးကို အရန် ဆန်ရောင်းချပေးသွားမည်ဟု သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်အနေဖြင့် COVID-19 ဖြစ်ပွားနေချိန်တွင် ဆန်ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်စေရန်၊ တောင်သူလယ်သမားများ၏ စပါးစပေါ်ချိန်တွင် ဝင်ငွေမကျစေရန်နှင့် ပို့ကုန်လုပ်ငန်းများပုံမှန်ဖြစ်စေရန်အတွက် ပြည်ပသို့ တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီ ၁၂၃ ခုထံမှ နိုင်ငံတော် အရန်ရိက္ခာဆန်များအား ဧပြီလကုန်မှ စတင်ကာ ဝယ်ယူ စုဆောင်းထားကြောင်းသိရသည်။
လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးကုန်သည်များအသင်း၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ဧည့်မထ ၂၅ မှတ် တစ်အိတ်လျှင် ၂၄၅၀၀ ကျပ် ပေါက်ဈေးရှိသဖြင့် တစ်ပြည်လျှင် ၁၀၂၁ ကျပ်နှုန်းဖြစ်သည်။
မန္တလေးတိုင်း ဆန်ကုန်သည်များအသင်း ၏ ဇူလိုင် ၈ရက်နေ့ ဈေးနှုန်းထုတ်ပြန်ချက်အရ ဧည့်မထ ၂၅ မှတ် တစ်အိတ်လျှင် ၂၀၅၀၀ ကျပ်ဖြစ်သဖြင့် တစ်ပြည်လျှင် ၈၅၄ ကျပ်နှုန်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးကုန်သည်များအသင်း ၊ဆန်စပါးကုန်စည်ဒိုင် (ဘုရင့်နောင်) ကုန်စည်ဒိုင်၏ ဈေးနှုန်းထုတ်ပြန်ချက် အရ ဧည့်မထ ၂၅ မှတ် တစ်အိတ်လျှင် ၂၁၀၀၀ ကျပ် ပေါက်ဈေးဖြစ်သဖြင့် တစ်ပြည်လျှင် ၈၇၅ ကျပ်နှုန်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ေ တာ့ ညီလေးအလော င်း ကို ခုထိ မတွေ့သေး ဘူးဗျာ
ကျွန်ေ တာ့ ညီလေးအလော င်း ကို ခုထိ မတွေ့သေး ဘူးဗျာ ကျွန်ေ တာ့် ညီလေးကို အခုထက်ထိ မတွေ့ကြသေးဘူး လားဗျာ ။ သူပြန်လာမယ် ပြောသွားတာ ။ ဒီနေ့နဲ့ဆို (၃) ရက်ရှိပြီ ။ အကို့မှာ နောက်ဆုံးအနေ နဲ့ ညီလေးရဲ့ ရုပ်အလောင်းလေး တွေ့ချင်လို့ ခဏခဏ လာရှာနေရတာ ။ ကယ်ဆယ်ရေး တို့ရယ် ညီလေးအလောင်း တွေ့ရင် ကျွန်တော့်ပြောပါဦး ‘’ဝှေခါမြေပြိုမှု ဖြစ်စဉ်တွင် ယူကြုံးမရဖြစ်နေသူအကို တမိသားစုဝင် ညီဖြစ်သူ အလောင်း တွေ့ခွင့် ရဖို့မျှော်နေ ။ ကျွန်တော်တို့ မေးမြန်းဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ သူ့မှာ ရင်ထဲက သောကဟာ ဘယ်လောက် ပြင်းထန်လဲမသိ မဖြေနိုင် စကားမပြောနိုင် နဲ့ […]
ရနျကုနျ စမျးခြောငျးမွို့နယျ အရှကေု့နျးလမျးအတှငျး ဆရာဝနျတဈဦး အသတျခံရ
စမျးခြောငျးမွို့နယျ အရှကေု့နျးလမျးအတှငျး ဆရာဝနျတဈဦး အသတျခံရမှု နိုဝငျဘာ ၃ ရကျ နံနကျပိုငျးက ဖွဈပှားခဲ့သညျ။ ဖွဈစဉျမှာ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး၊ စမျးခြောငျးမွို့နယျ မင်ျဂလာလမျးတှငျနထေိုငျသညျ့ ဆရာဝနျတဈဦးမှာ နံနကျ ၇ နာရီကြျောခနျ့တှငျ ဆေးခနျးဖှငျ့ရနျ ကားထားရာ အရှကေု့နျးလမျးသို့ လာရောကျခဲ့သညျ။ ထိုသို့လာရောကျစဉျ ကားနားအရောကျတှငျ အသကျ ၄၀ ဝနျးကငျြ အမြိုးသားတဈဦးက ဆရာဝနျ၏ လညျပငျအား ဓားဖွငျ့ထိုးကာ ပရိုဘောကျအငှားယာဉျတဈစီးဖွငျ့ ထှကျပွေးတိမျးရှောငျသှားခဲ့ကွောငျး ဖွဈစဉျအနီးရှိ CCTV မှတျတမျးမြားအရ သိရသညျ။ “ မနကျ ၇ နာရီခှဲ ဝနျးကငျြလောကျက အမြိုးသမီးလို ဝတျဆငျထားတဲ့ အကြီင်ျပနျးရောငျနဲ့ အမြိုးသားတဈဦးက လကျထဲမှာ ပနျးတှကေိုငျထားပွီး သှေးတှနေဲ့တှလေို့ ရဲစခနျးကို အကွောငျးကွားလျိုကျတယျ။ ပွီးတော့ အရှကေု့နျးလမျးထဲက ကားနားမှာ အမြိုးသားတဈဦး သှေးတှနေဲ့လဲနတောတှရေ့တယျ။ […]
အားလုံးကောငျးသော နလေ့ေး ဖွဈပါစေ ခငျမြား . .အရငျ လို Post တှပွေနျတငျပါတော့မယျ 🤍 … အခြိနျကာလ တဈခုမှ စိတျညဈစရာတှမြေားစှာကွုံခဲ့ပါတယျ . အနားမှာရှိပေးတဲ့ မိသားစုလို သူငယျခငျြးတှေ .. Ph နဲ့ရော Messenger မှာရော အားပေးတဲ့ တဈယောကျစီတိုငျးကို အထူးကြေးဇူး တငျပါတယျ ကြှနျတျော တဈနှဈ အပိတျခံရတယျအပျေါမှာ ဘာမှ ပွောစရာမရှိပါဘူး . ဒါပမေယျ့ စားဝတျနရေေး နဲ့ ကြှနျတျော တာဝနျယူထားတဲ့ လူတှအေတှကျတော့ ကြှနျတျော ပွနျရုနျးကနျမှ ရမှာဖွဈတဲ့ အတှကျ . ကြှနျတျောရှငျသနျနမှေ ရပါမယျ . We Love Yone Lay .. We Stand With […]